Apple lany tahiry amin'ny Apple Watch Series 6 titanium | Vaovao IPhone
Ny Apple Watch Series 6 amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny casing titanium dia zara raha misy. Toa na any Etazonia na any amin'ireo tsena lehibe dia sarotra ny mahita maodely misy ny Apple Watch Edition, izany hoe ny andiany 6 amin'ny famaranana titanium.
Raisina an-tsaina fa misy iray volana ary kely kokoa Septambra Keynote an'ny Apple, Azo heverina fa ny andiany 7 vaovao dia havoaka amin'ity taona ity, ary izany no anton'ny stock stock out of stock.
Mark Gurman dia navoaka tao amin'ny bilaoginy Bloomberg fa tsy misy ankehitriny ny Apple Watch Edition (ilay manana casing titanium) any Etazonia sy amin'ny tsena lehibe an'ny orinasa.
Apple dia tsy nampita na inona na inona tamin'io lafiny io, na koa najanona ny maodely na koa misy ny olana eo amin'ny famatsiana. Azo inoana fa ny antony dia ny famoahana ny Apple Watch Series 7, voalahatra ho an'ny volana septambra amin'ny teny fanalahidy izay hankalazan'ny orinasa hanolotra ireo iPhones vaovao amin'ity taona ity.
Ny teoria izay nohazavain'i Mark Gurman tao amin'ny bilaoginy dia hoe a modely tena lafo, ary noho ny varotra vitsivitsy dia tsy te-hanamboatra singa marobe ny orinasa, ary lany ny tahiry.
Fa mandeha lavitra kokoa aho. Fa maninona i Apple no tsy nanao unité bebe kokoa rehefa hitany fa ho lany tahiry? Satria azo heverina fa toy ny nitranga tamin'ny taon-dasa tamin'ny Apple Watch Series 5, ny andiany 7 vaovao dia manome vaovao kely raha oharina amin'ny andiany 6 ankehitriny, ka manapa-kevitra ny orinasa tadidio ny Apple Watch Series 6 rehefa mandefa ny andiany faha-7 izy, ary izany no antony tsy nanapahan-kevitra hanamboatra andian-dahatsoratra kasaina hisotro ronono ao anatin'ny iray volana.
Noho izany dia hiandry ny hetsika Apple manaraka isika, amin'ny ankapobeny ho an'ny volana septambra (mbola tsy misy ny fanamafisana), ary hamela fisalasalana isika raha toa ka marina ny ahiahiko na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia lany tahiry amin'ny titanium Apple Watch Series 6